Abantu bangazi kanjani umbala wabo oyinhloko we-ray? - Mytika Speak
Ikhaya / Ama-Rays / Abantu bangazi kanjani umbala wabo oyinhloko we-ray?
Abantu bayaqaphela ingqikithi yabo ray umbala ngokuxhuma nge Okwangempela.
Lapho umuntu engazemukeli, bayamvumela owabo uhlamvu ukufihla imisebe yabo eyinhloko. Esikhundleni salokho iningi libonisa imisebe abayithandayo. Lokhu akujwayele ukusebenza kahle kakhulu.
Isibonelo, uDean une-pink core ray. Kunengxenye yakhe eyaziyo kepha kunokuba abhekane nayo futhi azamukele, ukhetha ukuveza okunsomi okwaziyo. Ubaba kaDean wayenguprofesa wezibalo futhi wayehlala ebheka ubaba wakhe ngenkathi esakhula. Esikhundleni sokubona uDean njengohlakaniphe kakhulu, iningi labantu agijimela kubo empeleni limbona ezikhukhumeza. Isizathu esenza uDean abonakale ezikhukhumeza yingoba umnyombo wakhe awuphephile futhi uzama ukuveza ukuthi unolwazi. Umuntu ongazethembi ngolwazi lwabo weqa ngokweqile ngokuzikhukhumeza.
Lapho uzazi ngempela futhi uzamukela, ungahlola izici zakho bese uzifanisa ne- izici eziyinhloko zemisebe ngayinye. Vele wazi ukuthi iningi labantu linemisebe eminingi abayicoshe kwabanye. I-ray eyinhloko ingabonakala ngemuva kokuthi izindaba eziphathelene neminye imisebe zisetshenzisiwe.
Sula amabala, ukuze ngikwazi ukukhanya
Ukuguga ngesikhathi, iwayini lekhethelo
Lungisa imifantu, ukuze ngikwazi ukukhanya
Tshala emhlabathini, ukuze imbewu ikhule
Indawo ebunjiwe, ingenza ngigqame
Ilangabi elincane, umlilo ukukhanyisa
Bheka amehlo, ukuze ubone
Imisebe eyinhloko ngaphakathi, wena nami
Amathegiukuqonda i-core ray ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya